Yugawani Media“निर्वाचन आयोग किन चुपचाप छ ? ः सभापति देउवा - Yugawani Media
“निर्वाचन आयोग किन चुपचाप छ ? ः सभापति देउवा
२०७७ फाल्गुन ३ गते सोमबार, २०:०९ मा प्रकाशित
काठमाण्डौ , ३ फागुन ।नेपाली कांग्रेसले आज देशभरका ७७ रै जिल्लामा एकसाथ ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा बिघटन गैर संबैधानिक र अप्रजातान्त्रीकभन्दै बिरोध सभाको आयोजना गर्यो ।
जुलुसको आधारमा अदालतले निर्णय गर्ने हो भने किन चाहियो कानून भन्दै सभापति देउवाले कम्युनिष्टको झगडाले कांग्रेसमा समस्या शुरु भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यिनको झगडाले हाम्रो पार्टीमा समेत समस्या आइरहेको छ । सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले कुर्सीका लागि अहिले ओली र प्रचण्डबीच झगडा भइरहेको बताउनुभयो।
उहाँले निर्वाचन आयोगको काम प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन आयोग किन चुपचाप छ । कुनै पनि संसद्को विघटन भएको छ महिनाभित्र चुनाव गराउनैपर्छ तर निर्वाचन आयोगलाई वास्ता छैन ।
निर्वाचन आयोगले किन अहिलेसम्म निर्वाचन कार्यक्रम बाहिर निकाल्दैन ? चुनाव नगराउने हो भने भन्नुपर्यो चुनाव गराउँदिन भनेर । चुनाव गराउने हो भने निर्वाचनको प्रक्रिया सुरू गरेकै छैन । कुनै पनि संसदको विघटन भएको छ, महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ ।’